म मित्रताको अँगालो हाल्छु प्रचण्ड धृतराष्ट्रको जस्तो अंगालो हाल्नुहुन्छः प्रधानमन्त्री ओली – ramechhapkhabar.com
म मित्रताको अँगालो हाल्छु प्रचण्ड धृतराष्ट्रको जस्तो अंगालो हाल्नुहुन्छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, १५ पुस ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोरीलाई चुनाव जिताउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग चुनाव लडेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार काठमाण्डुको कार्की बैंङ्क्येटमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्डले चितवनमा छोरीलाई जिताउन कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको आरोप लगाएका हुन् ।
त्यस्तै उनले प्रचण्डलाई षड्यन्त्रकारी राजनीतिक छोड्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपालसँग बहुमत नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘म मित्रताले अँगालो हाल्छु उहाँ धृतराष्ट्रको जस्तो अंगालो हाल्नुहुन्छ । मैले उहाँलाई षड्यन्त्रकारी राजनीतिक छोड्नुस् । राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेको छु । उहाँ बहुमत छ भन्नुहुन्छ । के को बहुमत छ ? ’, उनले भने ।
वैशाखपछि ओलीको राजनीति पत्तासाफ हुन्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई दुर्घटना गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव नगराउने दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध मंगलबार राजधानीको प्रदर्शनीमार्गमा प्रचण्ड(माधव पक्षीय नेकपाले आयोजना गरेको विरोधसभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखपछि ओली प्रधानमन्त्री पनि नरहने र राजनीति समाप्त हुने दाबी गरे ।
उनले भने‚ ‘केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने, मलाई लाग्छ त्यस्तै हो। उनी गोटी भएको हो । वैशाखपछि उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट उनको पत्तासाफ हुनेवाला छ । अनि उनैले श्री ३ महाराज हुन्छु भनेर सपना देखेर हुनेवाला हो र आजको नेपालमा ?
उनले पार्टीमा बहुमत रहेकै अवस्थामा संसद विघटन गरेर चुनाव गराउन खोज्नेको राजनीति पत्तासाफ हुने उनले बताए।
‘यो चुनाव गराउनका लागि घोषणा भएको होइन, हुँदाखादाको बहुमत छोडेर कसैले चुनाव गराउँछ?’’
अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखमा चुनाव नहुने र मंसिरमा भए पनि त्यसले गलत नजिर बसाल्ने बताए। उनले अर्को प्रधानमनत्रीले पनि संसद विघटन गर्न सक्नेतर्फ सचेत पनि गराए ।